Qeybta 1: Maxaad u baahan tahay inaad nadiifiso kaydinta on iPhone?
Qeybta 2: iPhone nadiifi in 1 click kaydinta
Qeybta 3: Sida loo isticmaalo SafeEraser Wondershare si aad u nadiifiso aad kaydinta iPhone
Ma aad iPhone si joogto ah idiin siinayo in "kaydinta heli karo ma ku filan" digniin? Haddii aad hesho kuwa markaa waad taqaan sida ay wax aad looga xumaado ay noqon karaan. Tani waa sababta aan la haynin kaydinta ku filan si dhab ah xaqiro kartaa shaqo ee aad iPhone oo keeni karta in qaab saboolka ah. Marka laga soo tago in aad iPhone in ay si fiican u shaqeeyaan, waxaa jira dhowr sababood oo kale sababta aad u rabto lahaa si aad u nadiifiso aad kaydinta iPhone. Qaar ka mid ah waa:
Nadiifinta aad kaydinta kaa caawin doona aad iPhone ee waxqabadka ee aagga fiicnayn. Taas macnaheedu waxa weeye in aad iPhone sii wadi doonaan si ay u qabtaan oo kaliya sida ay yeeleen markii ay calaamad cusub.
Haddii aad isku dayeyso inaad cusboonaysiiso si macruufka 9, isagoo lagu keydiyo oo nadiif ah ka dhigi doonaa geeddi-socodka in inta badan ka sahlan.
Nadiifinta aad kaydinta iPhone sidoo kale dedejin doonaa qaab aad telefoonka ee. Haddii aad helayso "ma ku filan kaydinta heli karo" fariin ka dibna aad dareentay laga yaabaa in ay sidoo kale ka dheeraado si aad u hesho hawlaha yar gudataan aad iPhone. Nadiifinta aad kaydinta baabi'iyo doono dhibaatadan mar oo dhan.
Sii daynta aad kaydinta iPhone ayaa sidoo kale u oggolaan doona in aad si aad u hesho kaydinta badan oo wax ku ool ah u walax cusub ee aad rabto. Taasi app cusub oo wax soo saar leh in aad rabto in aad sahlanaan doonto in ay ka soo dejisan iyo shaqeyn doonaa wax badan ka fiican.
Muhiimadda nadaafadda aad kaydinta aan la carabka ku filan karo. Laakiin si siman u muhim ah waa sida aad iPhone ee lagu keydiyo ilaa nadiifiso. Waxaa jira siyaabo dhowr ah si ay u samayn inkastoo ay had iyo jeer ugu fiican si ay u tagaan waayo, intay jidka ammaan ah oo wax ku ool ah loo sameeyo. Nasiib wanaag idiin, waxaa jira qalab ka caawin kara in aad taas samayn wax ku ool ah oo aad si fudud.
Wondershare SafeEraser waxaa loogu tala galay si uu kaaga caawiyo inaad nadiifiso kaydinta iPhone. Software Tani waxay kaa caawin doontaa in aad dhammaystiro hawsha oo dhan muhiim ah in talaabooyin aad u fudud sida aynu wax yar ka dib uu arki doono. Qaar ka mid ah qaababka ka dhigi SafeEraser Wondershare si wax ku ool ah waxaa ka mid ah;
Software gelineya inaad si nabad ah ku iibin ama dib aad iPhone oo aan ka werwerayn oo ku saabsan mid ka mid ah macluumaadkaaga shakhsiyeed helo gacmo qaldan. Tani waa sababta SafeEraser tirtiri doonaa dhammaan wadooyinka macluumaadka xasaasiga ah sida warbixin bangiyada iyo emails xasaasi ah.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si joogto ah masixi macluumaadka aadan rabin in aad iPhone
Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad si joogto ah loo fududeeyo qalab aad
Waxaad kaloo isticmaali kartaa SafeEraser oo bilaash ah ilaa meel oo sii qaab qalab ee heer aan fiicnayn.
SafeEraser US isticmaalaa hababka Military ah oo burburiyey xogta gaarka ah hubinta in ay tahay unrecoverable.
SafeEraser waa fududahay in la isticmaalo sida aynu kor ku soo sheegnay oo ka fiirsaneysa sida ay muhiim u tahay in aad kaydinta Iphone nadiif ah, waxaa muhiim ah in iPhone kasta ha ku leeyihiin kaliya SafeEraser Wondershare iyaga la laakiin sidoo kale si ay u ogaadaan sida loo isticmaalo. Raac tallaabooyinkan fudud si ay u isticmaalaan SafeEraser si fudud oo wax ku ool ah.
Talaabada 1: maleeyo in aad soo bixi oo lagu rakibay SafeEraser si aad u computer, xiriiriyaan iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Wondershare SafeEraser aqoonsan doonaa qalab aad iyo waa in aad suuqa kala socda.
Sida aad arki kartaa, in aad iPhone lagu soo bandhigi doonaa kaga tegey 5 qaababka uu ka soo xusho bidixda.
Talaabada 2: Laga soo bilaabo 5 fursadaha, dooran feature 1-riix nadiifi. Riix 1-Guji nadiifi feature on furmo suuqa hoose ku xusan.
Tani waxay keeni doonaa baaritaan toos ah oo aad iPhone aadeen sida tan.
Talaabada 3: Mid ka mid ah iskaanka si toos dhamaystiran tahay; dhammaan faylasha junk aad lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala dhashay. Waxaad markaa riixi kartaa Nadiifinta si lacag la'aan ah ilaa meel disk.
Waa arrin aad u muhiim ah in aad haysato qalabka ku xiran inta ay socoto oo dhan si loo hubiyo in hannaanka si sax ah oo dhameystiran.
Talaabada 4: Marka geedi socodku waa dhameystiran Wondershare SafeEraser ku siin doonaa warbixin ku saabsan xaaladda ay ku soo bandhigeen suuqa kala socda iPhone ee.
Waxaad markaa dooran kartaa in aad guji "guriga" inuu ku soo laabto screen guriga ama aad riixi kartaa "rescan" mar kale baarista qalab loogu files junk aan la rabin.
Sida aad si cad u arki karaan, nidaamka waa mid aad u fudud si uu u dhameystiro iyo iPhone si fudud loo nadiifiyo ee files junk aan la rabin. Xaaladaha intooda badan files junk kuwani waa waxa keeni qaab iPhone aad ka yar tahay xiddig. Maxaa intaas ka badan faa'iidada badan waa in aad ku soo celiyaan arrintaas oo dhan mar dura kala duwan si aad marna mar kale si aad u hesho "ma ku filan kaydinta heli karo" farriin aad iPhone.
Wondershare SafeEraser ayaa diyaar u ah Windows iyo OS Mac iyo waa u fududahay in ay soo baxdo iyo rakibi, in aan ku xuso waa heer sare ah oo waxtar leh oo si sahlan loo isticmaali.
Nadiifi iPhone Kaydinta Video Tutorial
> Resource > iPhone > Sidee loo nadiifiyaa iPhone Kaydinta